Farmaajo oo ku celiyey in Doorasho Qof & Cod Dalka ka qabanayaan – XAMAR POST
Farmaajo oo ku celiyey in Doorasho Qof & Cod Dalka ka qabanayaan
By Mohamed Abdi On Apr 20, 2021
Si loo helo doorasho daaha gadaashiisa ka fog Dawlada federaalka waxay diyaarineysaa Hanaankii loo gaarsiin lahaa dalka Doorasho qof iyo cod ah.
Muddo 8 cisho laga joogo Baarlamaanka Golaha shacabka ayaa waxay 12-kii bishaan ku kordhiyeen Hay’adaha Dawlada Federaalka labo sano ay sii shaqeyn karaan.
Safarka Farmaajo Ee Kinshasa uu ku tegay waxa uu soo ban bixiyey shaki kusaabsanaa dalab uu hordhigay Madaxweynaha Congo Felex Tshasekedi,oo ah in lala heshiisiiyo Mucaaradka kasoo horjeeda Villa Soomaalia.
Khudbad uu jeediyey Madaxweyne farmaajo inta uu kinsasha kusugnaa ayuu si gambasho laheyn usheegay in Dawladiisu dooneyso sidii Soomaaliya loo gaarsiin lahaa nidaamka Casriga ah ee Dimoqraadiyada oo doorasho shacabka ay awooda leeyihiina dalka looga hirgelin lahaa.
“Soomaaliya waxay sameyn doontaa wadiiqo kasta oo ay ku gaarsiin karto dalka,hadafkeeduna yahay sameynta Dawlad Dadka iyaga doortaan qofka ay rabaan,si loola midnoqdo dimoqraadiyada hormarsan Ee Caalamka ka jirta ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo”
Dib ugu soo laabashadiisa Farmaajo Ee Saaka oo talaado aheyd,waxay ka dhigneyd soo gaabinta mudadii loo qorsheeyey safarkiisa oo labo cisho ahaa,sabab la xiriirta in dalka marxalad adag ku jiro.
Caasimada oo laga dareemayey maalmahaan dhaq dhaqaaqyo ciidan oo Dawlada lagu diidan yahay kadib markii General Saadaq Joon uu xaafada Shiir kole deegaansaday isagoo askar badan wata.
Talisyada ciidanka ayaa heegan la geliyey si looga hortego fadqalalo walbo oo siyaasada lagu wiiqayo iyadoo dhowr jeer hore Dawladu sheegtay inay jiraan Dalal shisheeye oo dhibaato ku ah Qaranimada iyo Madaxbanaanida Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumada Xilgaarsiinta Cusmaan Abokor Dubbe ayaa ka digay in dhibaatooyinka loo gacmo haatinayo dalka ay bur burin karto hadii aan laga joogsan.
Gudoomiyaha Xisbiga Horu-socod Qaran Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa bilo ka hor ugu baaqay Madaxweyne Farmaajo in awood isku dhejin hadii uu sameeyo dhici karto in waddanka dib ugu noqdo Fowdadii iyo kala dambeyntii lasoo maray sidaa awgeedna uu ka codsaday in xukunka wareejiyo.
Odorosyada ay Siyaasiyiinta qabaan waxay ku cabirayaan in xaalada dalka ay meel hagaagsan aheyn hadii is jiid jiidka dawlada iyo mucaaradka hadalada xanafta leh hawada isku marinayaan joojin,bad baadinta dalkana aan laga qeyb qaadan ay ka cabsi qabaan bur bur ku yimaada nimaadka Dawladnimada.
Puntland Oo Bedeshay Barnaamij Muhiim Ah Ay Ku Shaqeyn jirtay
Qarax Lagu dilay gudoomiyihii siyaasada degmada Dayniile